Maalinta: Ogast 8, 2018
KTO Karatay waxay waxbarashadeeda uqalineysaa maadooyinka Soomaliya iyo Ganacsiga Caalamiga ah
Konya Rugta Ganacsiga (KTO) Jaamacadda Karatay oo ka tirsan Kuliyadda Dhaqaalaha iyo Waaxda Sayniska Maareynta Ganacsiga Caalamiga ah iyo Saadka oo leh shuruudaha maanta looga baahan yahay ee dhinaca saadka iyo khubarada ganacsiga caalamiga ah, ayaa doonayay inay qalin jabiyaan. [More ...]
Vali Tutulmaz Ankara-Izmir YHT Line Baaritaanada Meesha
Guddoomiye Mustafa Tutulmaz, khadka Ankara-Izmir ee Xawaaraha Tareenka ee Xawaaraha Sare ee Afyonkarahisar ee hawsha socda ee mashruuca ayaa la baarey. Gudoomiyaha Ankara-İzmir Line Xawaare Sare ee Xawaare Sare oo ku saabsan shaqooyinka socda ee goobta İscehisar Seydiler [More ...]
3 Kadib Sheegashada Socdaalka. Muuqaalka Garoonka ee Air
Eedeymaha ku saabsan burburka wadad-weynaha saddexaad ee garoonka diyaaradaha, dhismaha garoonka cusub, oo lagu dhawaaqay in la isticmaali doono bisha Oktoobar, ayaa laga arkayay cirka. Muuqaalka la kala qeybiyey ee garoonka diyaaradaha ee garoonka ka dib sheegashadii soo jiidatay dareenka soo jiidashada leh. ugu horeysay [More ...]
Xarunta Sayniska ee Kayacık iyo Dib-u-eegista Dhismaha Konya YHT Gar!
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 07-da Agoosto 2018 Talaadada, wuxuu indha indheyn ku sameeyay Xarunta Konya YHT Station iyo Kayacık Logistics Center, halkaas oo shaqooyinka dhismaha ay ka socdaan, ayna macluumaad ka heleen saraakiisha shirkadda qandaraaslayaasha. Konya YHT [More ...]
Madaxweynaha Erdogan oo ku dhawaaqay mashruucyo TCDD
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu shaqsiyan ku dhawaaqay tirada mashruucyada 100 ee TCDD ee 8 ee barnaamijka Xaragada Maalinlaha ah ee 5 lagu qabtay Be Congresstepe Millet Congress iyo Xarunta Dhaqanka. Mashaariicda Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha [More ...]
Magaca TCDD Magaca Tafsiirta Sheegashada Sheegashooyinka
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), laga helay war ku saabsan warka ah in uu bedeli doono magaca Enterprise Agaasinka Guud. Qaar ka mid xisaabaadka warbaahinta iyo warbaahinta bulshada, magaca Agaasinka Guud ee TCDD “Xeerka Tareenka [More ...]
RayHaber 08.08.2018 Warbixinta Shirka
3. Diyaaradda Sahaminta Diyaaradda Müselles-Çatalca Railway Railway-Mashruuca Adeegga Wadahadalka Waxaa Loo Qaadi Doonaa Ankara-İstanbul YHT Line Sazak Aagga Isuduwaha E39 Kala Bixin La'aan: Laydhka Ulukışla Heerka Kala Fududaynta Dayactirka Shaqada Dayactirka Shaqada iyo Adeegga Dayactirka [More ...]
3 Isticmaalay Tuulada Bari ee Istanbul ee Tender si ay u bilaabaan qaabka BOT
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, kaas oo loo sameeyey dadweynaha by Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan 100 Barnaamijka Maalinta fulinta oo kibirkii Turkey ee sheegaysa in ay dardar-mashaariic shaqo, 3 Floor Large Istanbul Tunnel [More ...]
Meelo Taariikhi ah oo Lagu Geeriyooday Antalya oo aan lahayn TIR
Degmada Kepez hadda waa 20 oo ka timid Usak kadib markii gaari xamuul ah oo TCDD ah. Wuxuu u keenay duulayadii ugu horreeyay ee qarnigii Antalya. Duqa Magaalada Kepez Hakan Tütüncü, kadib markii tareenka la raaco, ayaa hadda ugaarta Antalya [More ...]
3 oo ka socda Guddiga tartanka.
Guddiga tartanka, dhismaha Cengiz, dhismaha Mapa, Limak Construction, Kolin Construction iyo Kooxaha Wadajirka ah ee Wadajirta dhismaha ee Kalyon Istanbul 3. 4 waxay ansaxisay in la aasaasay koox cusub oo wada shaqeyneed si ay ugu adeegaan garoonka diyaaradaha. [More ...]
Maanta taariikhda: 8 August August 1903 la jilay Florina
Maanta Taariikh 8 August 1903 Buundada u dhaxaysa idaacadaha Florina iyo Kinali ayaa la burburiyay